Yosua 12 AKCB - Matteus 12 LB
Ahemfo A Wodii Wɔn So Wɔ Yordan Apuei Fam
1Eyinom ne ahemfo a wɔwɔ Asubɔnten Yordan apuei fam a wokunkum wɔn na wɔfaa wɔn nsase. Wɔn nsase no fi Arnon Subon kosi Bepɔw Hermon so a Yordan Bon asase a ɛwɔ apuei fam nyinaa ka ho.
2Wodii Amorihene Sihon a na ɔte Hesbon no so.
Na nʼaheman bi ne Aroer a ɛwɔ Arnon Subon ano na ɛsen fi ne mfimfini kosi Asubɔnten Yabok a ɛda hɔ sɛ ɔhye ma Amorifo no. Nnɛ yi, Gilead fa a ɛda Asubɔnten Yabok atifi no ka ɔmantam no ho.
3Efi Yordan bon atifi a ɛbɛn Galilea po no atɔe fam mpoano na esian ba anafo fam besi Nkyene Po, fi Bet-Yesimot kosi Pisga nsian so hyɛɛ Sihon ase.
4Basanhene Og a otwa Refaitefo to no tenaa Astarot ne Edrei asase so.
5Na odii hene wɔ ɔman a efi Bepɔw Hermon so de kosi Saleka wɔ atifi fam ne Basan a ɛwɔ apuei fam nyinaa, de kɔ atɔe fam kosi Gesurfo ne Maakatfo ahemman hye so. Gilead fa a ɛwɔ atifi fam, ne ɔfa a aka a na ɛwɔ Hesbonhene Sihon asase mu no ka ho.
6Na Mose a ɔyɛ Awurade somfo no ne Israelfo atɔre ɔhene Sihon ne ɔhene Og nkurɔfo ase. Mose de wɔn asase maa Ruben ne Gad mmusuakuw ne Manase abusua fa no.
Yordan Apuei Fam Ahemfo A Wodii Wɔn So
7Saa ahemfo a wɔn din didi so yi na Yosua ne Israel nsraadɔm dii wɔn so wɔ Yordan atɔe fam fi Baal-Gad wɔ Lebanon bon mu de kosi Halak bepɔw a ekosi Seir no. (Na Yosua de asase no maa Israel mmusuakuw no sɛ wɔn agyapade, 8a ɛne, bepɔw so man, atɔe fam nkoko, Yordan Bon, mmepɔw mmepɔw nsian, Yudean sare so ne Negeb. Nnipa a na wɔte saa beae hɔ no yɛ Hetifo, Amorifo, Kanaanfo, Perisifo, Hewifo ne Yebusifo.)
Eyinom ne ahemfo a Israel dii wɔn so nkonim:
9Yerikohene baakoAi a ɛbɛn Bet-El hene baako10Yerusalemhene baakoHebronhene baako11Yarmuthene baakoLakishene baako12Eglonhene baakoGeserhene baako13Debirhene baakoGaderhene baako14Hormahene baakoAradhene baako15Libnahene baakoAdulamhene baako16Makedahene baakoBet-Elhene baako17Tapuahene baakoHeferhene baako18Afekhene baakoLasaronhene baako19Madonhene baakoHasorhene baako20Simronhene baakoAksafhene baako21Taanakhene baakoMegidohene baako22Kedeshene baakoYokneam a ɛwɔ Karmel ase hene baako23Dor a ɛwɔ Dor koko so hene, baakoamanaman a ɛwɔ Gilgal no hene ne baako24Tirsahene baako
AKCB : Yosua 12